China Spot light PL023 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Eurborn
Momba ny Biraonay
Tariby tsy tantera-drano
Fitaovana bitika kely an-dranomasina Marika 316 vita amin'ny metaly vita amin'ny tady feno feno miaraka amina vera fonosana CREE LED, fitaovana naoty amin'ny IP68 mamela ny fidobohana anaty rano ka manilika ireo olana mahazatra mipoitra avy amin'ny tsy fahampian'ny lalan-tany. 20/45/60 degre Safidy. Ny loharanom-pahalalana dia miaro mafy ny fiarovana amin'ny fidirana amin'ny rano.product dia mihazakazaka mamaly ny fepetra takiana amin'ny maripana rehetra. Jiro kely ivelany misy herinaratra 3 * 1W dia azo ampiasaina ho jiro fanasan-damba, hazavana manodidina ny fonenana, jiro toerana zaridaina. Manome anao ny safidy ny loko Mazava: RGB, CW, WW, NW, Mena, Green, Blue, Amber. Andiam-pianakaviana ahitana ML1021, PL021, PL023, ary PL026. Azonao atao ihany koa ny mahita ny bika avy amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny tranokalanay amin'ny fomba tsotra kokoa. EURBORN dia manolo-tena hikarakara ireo antsipiriany tsy raharahi'ny hafa. Isaky ny varimbazaha tsara amin'ny vokatra dia ampiasainay ny fitaovana tsara indrindra sy ny fanodinana ireo visy. Izy io dia azo ampiasaina ho fampiharana ny fanamboaran-jiro vy any ivelany, jiro tsy misy vy ary jiro tsy milatsaka amin'ny rano.
Fitaterana sy fonosana
Tsy mitovy isika
Loharano hazavana LED LED mahery be
Loko maivana RGB, CW.WW, NW, Mena, Maitso.Blue, Amber
ny hazavana S2O ° / F6O °
Herin'aratra N / A
Naoty IP IP68
Mari-pana manodidina -20 ° C ~ + 45 ° C
Ny fiainana antonony 5O, OOOHrs
Fitaovana (tsy voatery) N / A
Fampiharana Indoor / ivelany / Landscape / rendez-vous
Jiro PL023 SPOT
MODELY NO. Brand LED Loko hazo PowerMode fahan'ny Tariby Tariby fahefana Flux mamiratra Dimension DrillSize
PL023 CREE CW, WW, NW, Green Green, Blue, Amber S20 / F60 Rivotra tsy tapaka 350mA andian-dahatsoratra 3M 2X0.75mm² Tariby 3W 300LM 70x70x89 N / A
PL023D CREE CW, WW, NW, Green Green, Blue, Amber S20 / F60 Volapoky tsy tapaka 24VDC mirazotra 3M 2X0.75mm² Tariby 3.5W 300LM 70x70x89 N / A
PL023RGB Edison RGB 10/20/45/60 Rivotra tsy tapaka 350mA andian-dahatsoratra 2x3M 4X0.5mm² Tariby 9W N / A 70x70x89 N / A
PL023DMX-RGB Edison RGB 45 Volapoky tsy tapaka 24VDC DMX Controller mirazotra 1.1M 4X0.5mm² Tariby 3.5W N / A 70x70x89 N / A
DMX decoder amin'ny namboarina * Fanohanana ny data IES.
■ Sarintanin'ny tetikasa
Teo aloha: Fahazavana PL026
Manaraka: Fahazavana PL021
Ny entana rehetra dia ho fonosina ary halefa raha tsy efa nandalo fitsapana isan-karazany ny vokatra rehetra, ary ny fonosana ihany koa no singa lehibe indrindra izay tsy azo odian-tsy hita. Satria mavesatra ihany ny jiro vy tsy misy fangarony, dia nisafidy ny baoritra matevina tsara indrindra sy mafy indrindra ho an'ny antsipirian'ny fonosana izahay mba hahazoana antoka fa azo arovana tsara amin'ny vokatra na amin'ny dona mandritra ny fitaterana ny vokatra. Ny vokatra Oubo tsirairay avy dia mifanaraka amin'ny boaty anatiny tsy manam-paharoa ary hisafidy ny karazana fonosana mifanaraka amin'izany araka ny natiora, ny fanjakana ary ny lanjan'ny entana nohafarana mba hahazoana antoka fa feno ny vokatra tsirairay nefa tsy mamela elanelana eo anelanelan'ny boaty ary ny vokatra dia raikitra Ao amin'ny boaty Ny fonosana mahazatra antsika dia boaty anatiny mitafo mavo sy boaty ivelany mihombo. Raha mila manamboatra boaty loko manokana ho an'ny vokatra ny mpanjifa, dia azontsika atao ihany koa izany, raha ampahafantarinao mialoha ny varotra ataontsika, dia hanao fanitsiana mifanaraka amin'izany izahay amin'ny dingana voalohany.
Amin'ny maha-mpanamboatra jiro vy tsy misy fangarony any ivelany azy, i Eurborn dia manana laboratoara fitiliana feno. Tsy dia miantehitra amin'ny antoko fahatelo ivelany izahay satria efa manana andiana fitaovana matihanina mandroso sy feno indrindra, ary ny fitaovana rehetra dia zahana sy voatazona matetika. Hamarino fa afaka miasa ara-dalàna ny fitaovana rehetra ary manao fanitsiana ara-potoana sy fanaraha-maso ireo fitsapana mifandraika amin'ny vokatra amin'ny fotoana voalohany.
Ny atrikasa Eurborn dia misy milina matihanina maro sy fitaovana fanandramana toy ny lafaoro misy hafanana amin'ny rivotra, milina fanamainana tsy misy fangarony, efitrano fitsapana ultraviolet UV, milina fanamarihana laser, efitrano fitsapana hafanana sy hamandoana tsy tapaka, masinina fanandramana masira masinina, rafitra fandalinana spectrum LED haingana, fizarana Luminous intensity rafitra fanandramana (fitsapana IES), fanasitranana lafaoro UV ary lafaoro fanamainana hafanana tsy tapaka elektronika, sns. Afaka mahatratra rafitra fanaraha-maso kalitao feno ho an'ny vokatra rehetra vokarintsika.
Ny vokatra tsirairay dia hiatrika fitsapana fika elektronika 100%, fitsapana fahanterana 100% ary fanandramana tantera-drano 100%. Araka ny traikefa an-taonany maro, ny tontolo iainana atrehin'ilay vokatra dia avo he he heny mahery noho ny jiro anaty trano ho an'ny jiro vy tsy miankina an-tanety sy anaty rano. Fantatsika tsara fa ny jiro dia mety tsy mahita olana mandritra ny fotoana fohy amin'ny tontolo mahazatra. Ho an'ny vokatra Eurborn, dia manokana manokana izahay momba ny fiantohana fa ny jiro dia mety hahatratra ny fahombiazan'ny asa maharitra maharitra amin'ny tontolo masiaka isan-karazany. Amin'ny tontolo ara-dalàna, ny fitsapana ny tontolo iainana simika antsika dia matetika kokoa. Ity tontolo masiaka ity dia afaka mampiseho ny kalitaon'ny jiro LED mba hahazoana antoka fa tsy misy vokatra simba. Aorian'ny fisavana amin'ny alàlan'ny sosona i Ober dia hanome ny vokatra tsara indrindra ho antsika Ny tanan'ny mpanjifa.
Eurborn dia manana mari-pankasitrahana toy ny IP, CE, ROHS, patanty fisehoana ary ISO, sns.
Taratasy fanamarihana IP: Ny Fikambanana Iraisam-pirenena miaro amin'ny jiro (IP) dia manasokajy ny jiro arakaraka ny rafitry ny kaody IP ho an'ny vovoka, raharaha ivelany mivaingana ary fidiran'ny rano. Ohatra, Eurborn dia manamboatra vokatra ivelany indrindra toy ny jiro milevina sy anaty tany, jiro anaty rano. Ny jiro vy tsy misy fangarony any ivelany dia mihaona amin'ny IP68, ary azo ampiasaina amin'ny fampiasana anaty na fampiasana anaty rano. Fanamarihana CE CE: Ny vokatra dia tsy handrahona ny fepetra takian'ny fiarovana ny olombelona, ​​ny biby ary ny fiarovana ny vokatra. Ny vokatra tsirairay avy dia manana fanamarinana CE. Taratasy fanamarinana ROHS: fenitra mandatory napetraky ny lalàna EU. Ny anarany feno dia ny "Toro lalana amin'ny famerana ny fampiasana ireo singa mampidi-doza sasany amin'ny fitaovana elektrika sy elektronika". Ampiasaina indrindra hanatsarana ny fenitra ara-pitaovana sy fanodinana ny vokatra elektrika sy elektronika. Mora kokoa amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana izany. Ny tanjon'ity fenitra ity dia ny fanafoanana ny firamainty, mercury, cadmium, chromium hexavalent, biphenyls polybrominated ary ether diphenyl polybrominated amin'ny vokatra elektrika sy elektronika. Mba hiarovana tsara kokoa ny zon'ny sy ny tombotsoan'ny vokatra, dia manana ny fanamarinana ny patanty ho an'ny ankamaroan'ny vokatra mahazatra izahay. Taratasy fanamarinana ISO: ny andian-dahatsoratra ISO 9000 no fenitra malaza indrindra eo amin'ny fenitra iraisampirenena maro natsangan'ny ISO (International Organization for Standardization). Ity fenitra ity dia tsy ny fanombanana ny kalitaon'ny vokatra, fa ny fanombanana ny fanaraha-maso kalitao ny vokatra amin'ny fizotry ny famokarana. Fitsipika fitantanana fandaminana io.
1.Ny vatan'ny jiro amin'ny vokatra dia vita amin'ny vy vy SNS316L. 316 vy tsy misy fangarony dia misy Mo, izay tsara kokoa amin'ny fanoherana ny harafesina noho ny vy 304 tsy misy fangarony amin'ny tontolon'ny maripana avo. 316 mampihena ny atin'ny Cr indrindra ary mampitombo ny atin'ny Ni ary mampiakatra Mo2% ~ 3%. Noho izany, ny fahaizany manohitra harafesina dia matanjaka noho ny 304, mety ampiasaina amin'ny tontolo simika, ranomasina ary tontolo hafa.
2.Ny loharanom-pahazavana LED dia mandray ny marika CREE. CREE dia mpanavao ny jiro sy mpanamboatra semiconductor eny an-tsena. Ny tombony azo avy amin'ny puce dia avy amin'ny akora karbôna sianika (SiC), izay afaka mampiasa herinaratra bebe kokoa amin'ny toerana kely iray, raha mampitaha ireo haitao misy, fitaovana ary vokatra hafa izay mamokatra hafanana kely kokoa. Ny CREE LED dia manambatra ny fitaovana InGaN mitaky angovo mahomby amin'ny angovo sy ny substratin'ny tompon'ny orinasa G · SIC® ho iray, ka ny LED avo lenta sy avo lenta dia mahomby amin'ny fahombiazan'ny vidiny.
3.Ny vera dia mandray vera maotina + ampahany amin'ny lamba lamba landy, ary ny hatevin'ny vera dia 3-12mm.
4.Ny orinasa dia nisafidy substrat alim-pitantanana avo lenta miaraka amina fitondran-tena mafana mihoatra ny 2.0WM / K. Ny substrat aluminium dia ampiasaina ho fitaovana fanaparitahana hafanana mivantana ho an'ny LED, izay misy ifandraisany akaiky amin'ny fiainana iasan'ny LED. Ny substrate aliminioma fitondra hafanana avo lenta dia manana conduction tsara sy ny fahaizan'ny dissipation hafanana, ary mety kokoa amin'ny vokatra mitaky fahaiza-manafoana hafanana, indrindra ny LED mahery be.
Jiro eny ivelany
Fanamarihana lehibe: hataonay laharam-pahamehana ireo hafatra izay misy ny "Anaran'ny orinasa". Azafady mba alao antoka fa avelao amin'ny "fanontanianao" ity fampahalalana ity. Misaotra!
Spike jiro SL131
GL119SQ ao anaty
Ao anaty any EU1965H
GL140 ao anaty
LED singa LED03
Biraon'ny varotra: efitrano 702, tranoben'ny varotra Zhe Jiang, No. 430 Dongguan Avenue, Distrikan'i Nancheng, Tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong, Sina
Alefaso mailaka aminay: info@eurborn.com